“ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ တိုင်းရင်းသားနာမည် မဟုတ်ဘူး။ ခေါ်ဝေါ်စရာနာမည်သက်သက်ပါပဲ” – talk with Dr. Jacques P. Leider – part one | MoeMaKa Burmese News & Media
မကြာသေးခင်က ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အုပ်စုလိုက် တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့သောကြောင့် ဒေသတွင်း တည်ငြိမ်မှုပျက်ပြားကာ လူပေါင်းများစွာ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဘ၀ရောက်ခဲ့ရသည်။ အစိုးရစာရင်းဇယားများအရ လူပေါင်း ၈၀ နီးပါး သေဆုံးကာ ၆၄,၀၀၀ ၀န်းကျင် အိုးအိမ်မဲ့ဘ၀ရောက်ခဲ့ရသည် ဟုဆိုသည်။ ယင်းပြဿနာနှင့် ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းမှ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ဝေဖန်မှုများလည်း ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါသည်။
MAWKUN – ရခိုင်ပဋိပက္ခကို ညွှန်းဆိုကြတဲ့အခါမှာ စကားလုံးအသုံးအနှုန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ နိုင်ငံတကာမီဒီယာတချို့နဲ့ အချို့အဖွဲ့တွေက “လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု (genocide)”၊ “တိုင်း ရင်းသား သုတ်သင်ရှင်းလင်းမှု (ethnic cleansing)” စတဲ့ စကားလုံးတွေကို သုံးကြတာတွေ့ရတယ်။ The New York Times မှာပါသွားတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက ပါမောက္ခတစ် ယောက်ရေးတဲ့ အတွေးအမြင်ဆောင်းပါးမှာဆိုရင် “တိုင်းရင်း သားသုတ်သင်ရှင်းလင်းမှု” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သုံးသွားတယ်။ ဒီစကားလုံးတွေဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ ပကတိအခြေ အနေကို ထင်ဟပ်ကြ သလား။
8 Responses to “ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ တိုင်းရင်းသားနာမည် မဟုတ်ဘူး။ ခေါ်ဝေါ်စရာနာမည်သက်သက်ပါပဲ” – talk with Dr. Jacques P. Leider – part one
yee on August 28, 2012 at 10:12 am
“မျက်မှောက်ခေတ်ကျမှ ရခိုင်ဒေသ က မွတ်ဆလင်တွေကို သီးခြားအဖွဲ့တစ်ခုအဖြစ် ခွဲထုတ်သတ် မှတ်ဖို့အတွက် ဒီစကားလုံးကို ပြည်လည်ဖော်ထုတ်လိုက်ကြတာပဲ။ ”
This is very dangerous statement. Did Leider want us to ignore the illegal entry fo bengali?
Robert on August 28, 2012 at 10:20 am
Where is original interview?
Win Ko on August 28, 2012 at 12:27 pm
ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတွေက မြန်မာနိုင်ငံထဲကိုကျူးကျော်တယ်လို့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေက မမြင်ရလေအောင် တိုင်းရင်းသားတမျိုးအဖြစ်ဖန်တီးထားကြတယ်…လိမ်နေကြတာကြာလှပါပြီး..ဒါဟာ..နိုင်ငံတကာကိုအားမနာတာ တမျိုးပေ…မထီမဲ့မြင်လုပ်နေတာပေ… ဒါကို မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေက မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ကူညီပေးလိုက် ဝါဒဖြန့်ပေးလိုက် လုပ်နေကြတယ်..
Win Khine on August 28, 2012 at 12:32 pm
Bangali(so call Rohingya) is real Bangali. They are lies. Bangali(so call Rohingya) not ethnic in Myanamr. They are real Bangali. They are murders or terrorist.
darthar on August 28, 2012 at 5:36 pm
clear crystal. on August 28, 2012 at 6:57 pm
Very remarkable article,hear from well experienced and qualified person. The Extremist or Racist, may be,dislike,his briefs,but, fair and well knowledge persons will agree and accept his true,and reality words, that, he have found out correctly,by his strong,and well known history,with proofs.
honey on August 28, 2012 at 8:43 pm
သာထွန်းဝေ on September 2, 2012 at 9:40 am
သေချာပါတယ်ဗျာ ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှု့လို အကွက်ချ စီမံခဲ့ကြတာပါ …..တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု ဆိုတာဗလာနန္ထိပဲ ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားတွေ ဟာထာဝရ မြေဇာပင် မဖြစ်သင့်ပါ